Puntland oo mamnuucday lacag shilin Soomaali ah - BBC News Somali
Puntland oo mamnuucday lacag shilin Soomaali ah
7 Luulyo 2010
Image caption Shilin Soomaali
Maamulka Puntland ayaa maanta ku dhawaaqay inuu mamnuucay isticmaalka lacag shilin Soomaali ah oo xalay la soo geliyay magaalada Galkacyo taas oo markeedii hore laga keenay magaalada Muqdisho hase ahaatee maamulku ku xannibay garoonka dayuuradaha ee Galkacyo.
Lacagtaas oo tiradeeda lagu sheegay 17bilyan iyo bar waxaa xalay saqdii dhexe laga qaaday garoonka dayuuradaha ee Galkacyo waxana la geeyay gudaha magaalada waxase maamulku sheegay in isticmaalka lacagtaasi ay tahay mid sharcidarro ah oo ciqaab lagu mudan karo''.
Warka ka soo baxay maamulka Puntland ee ku saabsan lacagta Soomaaliga ah ee la keenay Galkacyo wuxuu ka dambeeyay ka dib markii xalay garoonka dayuuradaha Galkacyo laga saaray lacagtaas oo markii hore maamulku ku soo rogay xannibaad iyo in aan suuqyada dalka lagu siidayn karin taas looga cabsi qabay inay sicirbarar iyo qiime dhac ku keento shilinka Soomaaliga.
Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaarada Maaliyadda Puntland ayaa lagu sheegay in lacagtaas laga soo qaaday magaalada Muqdisho ayna qayb ka ahayd lacag la daabacay waqtigii C/llaahi Yuusuf uu m/waynaha ka ahaa dawladda federalka wuxuuna warku intaas ku daray in xilligan lacagtaas la soo siiyay laba gabdhood oo dayn ku lahaa dawladda federalka.
Hase ahaatee, sida ku cad warsaxaafadeedka maamulka Puntland wuxuu soo gelinta lacagtaas ee Puntland u arkay tallaabo looga gol leeyahay in lagu curyaamiyo isla markaasna khalkhal lagu geliyo ammaanka iyo dhaqaalaha Puntland taas oo sida la sheegay ay ka dambeeyaan shaqsiyaad ku sugan muqdisho iyo dalka dibaddiisa inkasta oo aanay jirin cid si rasmi ah farta loogu fiiqay.
Intii ay socotay doodda ku saabsan lacagtaas waxaa jiray kulamo dhexmaray maamulka iyo odayaal ka soo jeeda Galkacyo taas oo la xiriirtay laga yeelayo aragtiyada is-diiddan ee maamulka iyo hantiilayaasha lacagtaas soo waariday waxana markii dambe lagu heshiiyay in lacagtaas aanay marna u tallaabin suuqyada Puntland isla markaasna la gubo ka dibna dawladdu magdhow siiso labada gabdhood ee lacagta iska lahaa.
Taasi ma dhicin, waxana ka hordhacay in lacagtaas laga saaro garoonka dayuuradaha oo ay tiillay iyadoo taas loo maray malleeshiyo beeleed hubaysan iyadoo dhinaca kalana masuuliyiinta garoonka iyo kuwa maamulka ee Galkacyo lagu eedaynayo inay qayb ku lahaayeen fududaynta in lacagta laga qaado halkii ay taallay.
Wasiir ku xigeenka maaliyadda Cabdi Ibraahim Warsame (Qowdhan) oo ka hadlay shir jaraa’id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay arrintu u dhacday, dadkii ka dambeeyay iyo go’aanadda uu maamulku ka gaaray lacagtaas.
‘‘Iyadoo lagu jiro qorshihii ay dawladdu lacagtaas uga qaadi lahayd garoonka Galkacyo ayaa dad waxmagarad ahi lacagtii boobeen taas oo ay ka dambeeyaan dad ku sugan Muqdisho iyo dalka dibaddiisa kuwaas oo mar walba ku masqhuulsan inuusan dalku degnin.
Dawladda Puntland iyadoo tixgelinaysa nolosha shacabka danyarta ah ee horay loogu wareeriyay lacagihii la daabacay sanidihii 2006-2008 waxay mamnuucday in lacagtaas lagu isticmaalo gudaha Puntland.
Ganacsatada, xawaaladaha, sarriflayaasha waxaa lagu wargelinayaa inaysan isticmaalin lacagtaas sidoo kalana hay’adaha dawladda ee dakhliga qaada ayaa looga digay inay qaadaan lacagtaas sida dekedda, furdada, bankiga iyo dawladaha hoose.’’
War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in maamulku guddi u saarayo sida lagactaas looga saaray garoonka dayuuradaha oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo dawladdu leedahay taas oo la sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid walba oo ay ku caddaato inay ku lug leedahay fududaynta arrintaas.
Marka laga yimaado lacagta hadda u gudubtay gudaha Puntland waxaa kale oo cabsi laga qabaa lacago kale oo ka yimaada Muqdisho oo ku soo fool leh Puntland taas oo maamulku ka digay ka muuqata warsaxaafadeedka maanta ka soo baxay dawladda.
Marka laga yimaado carada maamulku ka muujinayo soo gelinta lacagtaas ee gudaha Puntland waxaa kaloo walwal ka muujiyay guud ahaan dadwaynaha qaybihiisa kala duwan waxana loo arkay tallaabo haddii aan wax laga qaban dhaqso u wiiiqi karta nolosha dad fara badan oo markii horeba ay noloshoodu hoosayso.
Dadka ku dhaqan Galkacyo iyagu waxayba ku tilmaameen sida arrintu u dhacday fadeexad dhaawac ku noqon karta dadka gobolka ku nool iyadoo dhinaca kalana dadku cabsi ka qabo saamaynta lacagaha noocan ahi ku yeelan karaan haddii ay u gudbaan suuqyada iyo ganacsiga dalka.
Sababtu waxa weeye iyadoo dhegaha dadwaynaha ay weli ka qaylinayso waxyeelladii ka soo gaartay dhaqaale burburkii ay sababeen lacagihii lagu daabacay gudaha Puntland sannidihii 2006-2008 taas oo suuqyada ka saartay hantida ganacato yar-yar islamarkaana ciriiri gelisay nolosha dadwayne fara badan waxana markii dambe daabacaadda lacagahaas ka dhashay gadood iyo dibadbaxyo waaawayn oo gobolka oo dhan saameeyay.